Manchester United oo qarka u saaran saxiixashada Pogba - BBC News Somali
Manchester United oo qarka u saaran saxiixashada Pogba
Pogba oo gool ka dhalinaya koobkii qaramada qaaradda Yurub.
Kooxda Manchester United ayaa qarka u saaran in ay lacagtii ugu badnayd ee abid ciyaaryahan lagu soo gato ay kula soo wareegto Paul Pogba oo Juventus u dheela kaas oo ku caya in kabadan 100 milyan oo doolar.
Saddex iyo labaatan jirkaas ayaa maalmaha soo socda Manchester u tagi doonaa baaritaan caafimaad kahor inta uusan dhicin kala iibsigii ciyaartoy ee ugu qaalisanaa adduunka.
Pogba oo wax aan 2 milyan dhanayn Manchester lagaga gatay sanadkii 2012 ayaa lafilayaa in uu ku soo laabto qiimo masixi doonaa rikoorkii 85 milyan ee Gini ahaa ee Gareth Bale uu ugu wareegay kooxda Real Madrid sanadkii 2013-kii.
Waxaa wali dhiman heshiiska gaarka ah ee ay shaqsiyan ula galayaan ciyaaryahanka, inkastoo la filayo in uu sidii caadiga ahayd u dhici doonaan.
Tababaraha kooxda ayaa jimcihii sheegay in heshiiskan la soo afjaro kahor ciyaarta koobaad Horyaalka Ingiriiska ee xilli ciyaareedkan ay la yeelanayaan Bournemouth 14 August.
Pogba oo Faransiiska ka caawiyay in ay gaaraan kamadambaysta ayaa ku guulasytay afarkoob oo uu naadigiisa la qaaday.
Wuxuu noqon doonaa ciyaaryahankii afraad ee Jose Mourinho uu u soo saxiixo Manchester United, waxaana ka sii horeeyay isaga Eric Bailly, Zlatan Ibrahimovic iyo Henrikh Mkhitaryan.
Waa markii koobaad ee koox Ingiriis ah ay ciyaartoy ku soo iibsato lacagta ugu saraysa adduunka oo dhan muddo labaatan sano ah.
Newcastle United ayay ahayd kooxdii u dambaysay ee sidaa samaysa markii ay 15 milyan oo Gini soo siisteen striker Alan oo weeraryahan ahaa iyaga oo ka soo gatay Blackburn Rovers.Kooxda Manchester United ayaa qarka u saaran in ay lacagtii ugu badnayd ee abid ciyaaryahan lagu soo gato ay kula soo wareegto Paul Pogba oo Juventus u dheela kaas oo ku caya in kabadan 100 milyan oo doolar.
Image caption Pogba oo horay ugu soo dheelat Man United 7 jeer oo kali ah ayuu saftay, wax gool ahna ma dhalinin
Image caption Gareth Bale iyo Paul Pogba